बोल्दा बोल्दै फोन काटियो ? नआत्तिनुस अब क्षतिपूर्ति पाइन्छ – email khabar | Latest news of Nepal
प्रकाशित : २०७३ चैत १० गते ०:२३
चैत १० , काठमाडौं – बोल्दा बोल्दै फोन काटियो ? नआत्तिनुस अब क्षतिपूर्ति पाइन्छ । बोल्दा बोल्दै फोन काटिने, आवाज प्रस्ट नबुझिने, नेटवर्क आउने जाने भइ रहने जस्ता समस्या दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवाग्राहीका वषौँदेखिका गुनासा अझै पनि छन् ।
नयाँ आईजीपी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि मात्र अघि बढाउने